WAXAAN DHIGI KARAA DHIR U AH BAKAYLAHA - XOOLAHA
Si aad u sameysid bakeyleyda fiicnayd, cuntadoodu waa inay ahaato mid hodan iyo kala duwan. Waxaa ka mid ah fitamiin quudinta dhirta geedo dhir u taagan. Maqaalkani wuxuu tixgelin doonaa haddii ay suurtogal tahay in la siiyo caleemaha xididkan si ay u xayawaan xoolaha yaryar, laga bilaabo da'da iyo inta ay le'eg tahay.
Si aad uga jawaabto su'aasha la weydiiyay, tixgeli sifooyinka geedkaan.
Ma taqaanaa? Australia, bakaylaha waa dhibaato aad u daran. Waxay yihiin cayayaanka, habab badan oo kala duwan ayaa loo isticmaalay si ay u xakameeyaan dadkooda, iyagoo ka dhisaya xayndaab iyo ugaarsiga si ay u sumoobaan iyo faafitaanka fayraska.
Dhirta waxaa lagu daraa maaddooyinka faa'iidada leh ee soo socda:
fitamiino A, E, B1, B2;
fitamiin C (100 g oo cagaaran - 150 mg);
Halkan waxaa ku yaal qaar ka mid ah saamaynta faa'iido leh ee warshadda on rodent:
Luteolin, oo ah qayb ka mid ah, waxay leedahay hanti la-dagaallanka, kaas oo gacan ka geysta ka-hortagga cudurada bakayle;
dhirta ayaa hodan ku ah fiber, taas oo gacan ka geysata dheefshiidka wanaagsan ee xoolaha iyo waxtarkooda sare;
Sababtoo ah saameynta apiol, cudurada fungal waxaa la cadaadiyey;
saameyn ku leh nidaamka wadnaha iyo wareegga dhiigga;
ka hortagga dhibaatooyinka kaadida;
soo-saarka caanaha oo kor u kacay ee haweenka nuujinaya;
korodhka galmada ee ragga naasaha;
saameyn bactericidal ah inta lagu jiro stomatitis;
hagaajinta difaaca iyo hagaajinta caafimaadka guud;
Ka qaadista xajiinta alerjiga (barar iyo cuncun maqaarka).
Dhir ayaa keeni kara waxyeelo:
Root iyo dusha sare waxay ku jiraan saliidyo badan oo lagama maarmaanka u keeni karo calool xanuun.
Waa muhiim! Ku dhaq dhir ka hor quudinta xayawaanka waa in loo baahdo: on laamuhu waxay noqon kartaa badan oo bakteeriyada pathogenic.
Next, waxaan tixgelinaynaa sifooyinka isticmaalka dhir sida cuntada ee bakaylaha caadiga ah, iyo sidoo kale qurxinta.
Cunto leh raaxo leh isticmaal dhir, iyo sidoo kale cagaarka kale casiir leh. Iyada oo ah cunto dardar leh, bahalkaas waa in uu ahaado cuntada caadiga ah ee bakaylaha caafimaad qaba, laakiin aan ku jirin tiro badan.
Kaararka qurxinta sidoo kale waxay u baahan yihiin fitamiino dheeri ah oo cunto maalinle ah, gaar ahaan tan ay qabaan cuduro badan oo la iska dhaxlo iyo cillado hiddaha oo ay keento isgoysyada jirka. Sida qaraabada waaweyn ee waaweyn, bakaylaha qurxinta waxay jecel yihiin inay nuugaan labada sare iyo xididdada dhirta.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan sida aad u cuni karto bakaylaha qurxinta.
Sidii hore loogu soo sheegay, dhirku ma keeni karo uun faa'iido u leh noolaha bakayle, laakiin sidoo kale waxyeello haddii loo isticmaalo xad-dhaaf. Si aan u waxyeeleynin xayawaankaaga xayawaanka ah, waxaa muhiim ah in la ogaado da'da loo ogol yahay in lagu quudiyo dhirta la tilmaamay.
Marka da'da iyo sida loo galo cuntada
Sida laga soo xigtay talooyinka takhaatiirta caafimaadka xoolaha, dhalinyarada bakayle waxay heli karaan cayayaanka ugu horreeya ee dhirta oo keliya 6 bilood jir, haddii ilmuhu uusan wax dhibaato ah u lahayn dheefshiidka.
Waxaa muhiim ah in la xasuusto in ay lagama maarmaan tahay in la bilaabo soo bandhigida warshadan cuntada ay ka qaadato qiyaaso aad u yaryar, macnaheedu waa labo ama saddex caws yaryar, si tartiib tartiib ah u baraya caruurta in ay soo saaraan wax soo saarka iyo daawashada falcelinta jirkooda. Cuntada waxaa lagu soo rogaa 1 mar 2 maalmood. Sidoo kale, tiro badan oo ka mid ah cuntooyinka asaasiga ah ayaa ka qayb qaadanaya ka hortagga cuduro kala duwan.
Waa muhiim! Haddii, ka dib markii dhirta quudinta, bakayle ayaa lahaa cunto cunidda, ka dibna muddo yar oo aad u baahan tahay inaad joojiso quudinta leh cagaaran.
Sidee iyo inta la siin karo
Halkan waxaa ah mabaadi'da quudinta bakaylaha:
Ka hor intaan la cunin, cagaarka waa in la diyaariyaa: raaci biyo nadiif ah oo qallalan, oo qallaji hawada. Tani waa lagama maarmaan si loo yareeyo boqolkiiba saliidda isdabajoogan.
Dhirta waa in aysan aheyn saldhigga cuntooyinka bakaylka, laakiin kaliya ku dar faytamiin si isku dar ah dhirta dabka, dabacasaha, qallajinta la qalajiyey iyo løvetann, qorshe, hooyo-iyo-hooyo iyo yar yar.
Waa lagama maarmaan in lagu daro isku dhafka caleemaha oo keliya laba lakab oo yaryar oo cagaaran ah oo ku saleysan hal xayawaan.
Waa maxay cuntada qallalan ee aad kareyso?
Dhirta ayaa si wanaagsan ula socda cuntooyinka qallalan ee soo socda:
dhulka hoostiisa dhulka hoostiisa;
quudin gaar ah ee bakaylaha;
quudinta lo'da (ee bakaylaha, waxaad u baahan tahay inaad doorato quudintaan aan laheyn walxaha nitrogenous synthetic);
isku dar ah oo la isku qurxiyo miraha la jarjaray (shaciir, digir, miro, vetch, galley).
Waa muhiim! Cunto-xumada ayaa ka sii dareysa harraadiga: la'aanta dheecaanku waxay keenaysaa dheef-shiid kiimikaad hooseeya, cunto xumo oo ka yaraata iyo xaaladaha guud ee ka sii daraya.
Xeerarka uruurinta iyo kaydinta
Si ay u bixiyaan bakaylaha leh vitamiin xilliga qaboobaha, waxaa suurtogal ah in la beero dhir la qalajiyey, kaas oo aan lumiyo hantida faa'iido leh, haddii si habboon loo diyaariyey oo loo kaydiyey.
Sida loo diyaariyo
Marka goosashada faytamiin si aad u quudiso, waxaa muhiim ah in la xusuusto sharciyada soo socda:
ku haboon dhir daaweynta guriga oo keliya oo aan lahayn isticmaalka kiimikada;
Cunto ma cuni kartid cuntada agagaarka jidka agagaaraha, sida baayagu u nuugo walxaha waxyeelada leh;
ururinta alaabta ceeriin ah, waxaad u baahan tahay inaad hubiso in geedo sun ah (xidid madow, celandine, qiiq, tubaako) ha ku dhacin.
Waxay noqon doontaa mid wax ku ool ah inaad ka akhri karto haddii tufaaxa, canab, cambe, kaabajka, digir, bocorka, xididada, hadhuudhka, badarka, bran iyo rooti la siin karo bakaylaha.
Hawlaha soo go'aya ee tallaabo tallaabo tallaabo ah:
Waxaa lagama maarmaan ah in laga qaado cagaarka cimilada qalalan - habkan si dhaqso ah ayuu u qalajin doonaa.
Ka dib markaad uruuriso, waxaad u baahan tahay inaad kala soocdo afkoda, ka saarto xayawaanka laftirka ah iyo lafaha yellowed.
Badeecadaha si fiican u raaci, ugu horeyn weel biyo ah ka dibna ku socda biyo qabow.
Rux ka saar biyaha xad-dhaafka ah iyo shukumaan.
Ku dheji dhuuban maro suuf ah oo ha u qalajin gebi ahaan.
Ku dheji dhir yar yar oo rucubyo leh oo ku caawiya moobiinka oo ku dhaji xaashiyaha buugta si fiican loo qoro.
Qorraxda tooska ah waa in aan loo oggolaan in ay soo gasho alaabta ceeriin ah: Sababtan awgeed, boqolkiiba chlorophyll ayaa hoos u dhacda, taas oo saameyn ku yeelan doonta faa'iidooyinka ka koobnaanta quudinta.
Iyadoo ku xiran xaaladaha cimilada, heerkulka iyo qoyaanka qolka, alaabta ceeriin way engegsan kartaa 2 ilaa 7 maalmood.
Haddii adigoo riixa cagaha kabaha si fudud u jajaban, waxay ka dhigan tahay in alaabta ceeriin ay qalajisay.
Ka saar xirmooyinka qalajinta iyo dukaanka.
Dhirta qalalan ayaa lagu kaydin karaa sida soo socota:
Ku duub qalabka qalalan ee bacaha dijarka ama weelasha dhalada leh daboolka.
Ku kaydi mugdi, qabow, meel fiican oo hawo leh oo qallalan.
Waa lagama maarmaan in la kaydiyo alaabta ceeriin aan ka badnayn 12 bilood.
Waxaan kugula talineynaa inaad ka akhrido sida loo quudiyo bakayle quudinta, waa maxay waxyaabaha lagu daro bakteeriyada, taas oo laamaha la siin karo bakaylaha, iyo sidoo kale waxa la siin karo iyo inaan la siin karin bakaylaha.
Waxyaabaha kale ee cagaarka ah ayaa lagu dari karaa cuntada
Si aad isugu dheellitirto cuntada xayawaanka raba, isticmaal dhirta cagaaran ee soo socda:
caleemaha yaryar ee galley iyo miro;
Sidaa darteed, su'aasha kor ku xusan - haddii ay suurtagal tahay in ay ku quudiyaan bakaylaha leh dhir, waxaan ka jawaabi doonaa suubban.
Ma taqaanaa? Ereyga "Spain" ee luuqada finnishka ah ee macnihiisu waxa weeye "xeebta bakayle".
Kaliya kiiskan waxaa lagama maarmaan ah in la xusuusto in lagu dabooli karo xayawaanka leh bukaanada fitamiinkani waa lagama maarmaan in la qaado qaybo yaryar si aysan u waxyeeleynin caafimaadkooda.